China CNC Pipe sy takelaka Laser Cutting Machine mpanamboatra sy mpamatsy |UNIONLASER
Karazana: Plate & fantsona fibre laser fanapahana milina
Vidiny: $21999~$28999(mifandraisa amiko)
antoka:3 taona ho an'ny milina, 2 taona ho an'ny loharano laser fibre, afa-tsy ny ampahany mitafy.
Rahoviana ianao no misafidy lovia & fantsona fibre laser cutting machine?
1. Ny fitaovana fanapahana anao dia fitaovana vy isan-karazany toy ny vy tsy misy pentina, varahina, alimo, vy karbaona sns.
2. Rehefa mila manapaka lovia sy fantsona ianao, indrindra ny fanapahana lovia.
3. Tsy te hifidy milina roa karazana.
4. Manapaka ny vidiny.
Endri-javatra ho an'ny milina fanapahana tamin'ny laser fibre metaly
1. Azo ampiharina amin'ny fanapahana sodina sy takelaka.
2. High hatevin'ny metaly frame miasa fandriana, voahodidin'ny mafana quenching, marin-toerana kokoa miasa fandriana firafitry, miaraka amin'ny faritra vovoka fanesorana asa.
3. Afaka ny tananao, ny halavan'ny Focal dia fehezin'ny rafitra miasa.Tsy mila manao regulation manual isika, izay misoroka tsara ny fahadisoana na lesoka ateraky ny fampandehanana tanana.
4. Ny kalitaon'ny fanapahana avo kokoa sy ny fahombiazany, ny hafainganam-pandehan'ny fanapahana dia hatramin'ny 80m / min miaraka amin'ny endrika ivelany sy tsara tarehy.
Faritra miasa 1500*3000mm
Manapaka halavan'ny sodina 3000mm, 6000mm
Savaivony fanapahana 20-220mm
Laser Power 1000w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w
Karazana laser Loharano laser fibre Raycus (IPG/MAX ho an'ny safidy)
Hafainganam-pandeha ambony indrindra 80m/min, Acc=0.8G
Herin'aratra 380v, 50hz/60hz, 50A
Sakan'ny tsipika ambany indrindra 0,02 mm
Rack System marika YYC 2M
Chain System Igus natao tany Alemaina
Fanohanana endrika sary AI, PLT, DXF, BMP, DST, IGES
Rafitra mitondra fiara Japoney Fuji Servo maotera
Rafitra fanaraha-maso Cypcut rafitra fanapahana
Gasy fanampiny Oxygène, azota, rivotra
Fomba fampangatsiahana Rafitra fampangatsiahana sy fiarovana ny rano
Loha laser fibre Raytools
- Malambolambo tsy misy burrs
- Autofocus miaraka amin'ny mazava tsara
- Garantie 2 taona ho an'ny kojakoja fototra
4mm hatevin'ny Sawtooth latabatra miasa
- Akora vy
- Mahazaka mitondra
- Mafimafy kokoa ary manohana kokoa
- Tsangatsangana izay mihazona mafy ny fitaovana miasa mandritra ny fihodinana
- Ampifandraiso amin'ny fitaovana ny asa ary atsangano ny fiasana mba hihodina
- Ampifandraisina amin'ny fametahana fantsona rehetra azo ampiharina
- Ampitomboy ny vokatra
Lovia sy fantsona fampidirana fitaovana: matihanina ampiasaina amin'ny fanapahana 0.5mm-22mm karbaona vy takelaka sy fantsona;0.5mm-14mm Stainless vy takelaka sy fantsona;takelaka sy fantsona galvanized;takelaka electrolytika sy fantsona;silisiôma vy sy fitaovana vy manify hafa, savaivony φ20mm -φ150mm.
Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana milina, ascenseur, vy vita amin'ny vy, fitaovana an-dakozia, kabinetra chassis, fitaovana milina, fitaovana elektrika, fitaovana jiro, famantarana ny dokam-barotra, kojakoja fiara, fitaovana fampirantiana, vokatra vy isan-karazany, fanapahana metaly ary indostria hafa.Tongasoa eto mba hilaza aminay ny fitaovana fanapahana sy ny hateviny, manome anao ny tsara indrindra soso-kevitra.
Q1: Ahoana ny momba ny fiantohana?
A1: 3 taona fiantohana kalitao.Ny milina miaraka amin'ny kojakoja lehibe (ankoatra ny entana azo ampiasaina) dia hovana maimaim-poana (ny ampahany sasany dia hotazonina) rehefa misy olana mandritra ny fotoanan'ny fiantohana.Manomboka miala amin'ny fotoanan'ny orinasanay ny fotoana fiantohana milina ary manomboka ny laharan'ny daty famokarana ny mpamokatra.
Q2: Tsy fantatro izay milina mety amiko?
A2: Mifandraisa aminay ary lazao anay:
1) Ny fitaovanao,
2) Max haben'ny fitaovanao,
3) Max tapaka hatevin'ny,
4) Hatevan'ny tapaka mahazatra,
Q3: Tsy mety amiko ny mankany Shina, fa tiako ny hahita ny toetry ny milina ao amin'ny orinasa.Inona no tokony hataoko?
A3: Manohana ny serivisy famokarana sary izahay.Ny departemantan'ny varotra izay mamaly ny fanontanianao voalohany dia ho tompon'andraikitra amin'ny asa fanaraha-maso ataonao.Azonao atao ny mifandray aminy mba handeha any amin'ny orinasantsika mba hijery ny fivoaran'ny famokarana ny milina, na mandefa ny santionany sary sy horonan-tsary tianao.Manohana serivisy santionany maimaim-poana izahay.
Q4: Tsy fantatro ny fomba fampiasana rehefa avy nahazo Na manana olana aho mandritra ny fampiasana, ahoana no atao?
A4: 1) Manana boky mpampiasa amin'ny antsipiriany misy sary sy CD izahay, azonao atao ny mianatra tsikelikely.Ary ny fanavaozam-baovaon'ny mpampiasa anay isam-bolana ho an'ny fianaranao mora raha misy fanavaozana amin'ny milina.
2) Raha manana olana mandritra ny fampiasana, dia mila ny teknisianina hitsara ny olana any an-kafa dia ho voavahan'ny anay.Afaka manome ny mpijery ekipa / WhatsApp / Email / Phone / Skype miaraka amin'ny cam mandra-pahavaha ny olanao rehetra.Afaka manome serivisy varavarana koa izahay raha ilainao.
teo aloha: CNC Pipe Laser Cutting Machine miaraka amin'ny loharano Laser Fibre
Manaraka: 12000w 20000w fibre laser fanapahana milina
Karazana vaovao 2000w metaly fibre fibre cutter
CNC Pipe Laser Cutting Machine amin'ny Fibre Laser...